कुन अक्षरको व्यक्तिको स्वभाव कस्तो हुन्छ? थाहा पाउनुहोस् | Rajmarga
काठमाडौं। प्राय मानिस आफ्नो नाम सधै प्यारो मान्‍ने गरिन्छ।उनीहरु आफ्नो नामको अक्षरलाई समेत बढी बढावा दिने गरेका छन्। प्राचीन कालमा पनि मानिसले नामकैको कारणबाट चुनौतीपूर्ण कार्य गर्दै आएको छ।
संसारमा ज्योतिष बिज्ञानले मानिसको नामबाट मनोबिज्ञान पढ्ने पद्धतिको विकास गरिसकेको छ। मानिसले अब आफ्नो नामको अक्षरबाट स्वभाव थाहा पाउन सक्छन्। ती सबै विकास मानिसको सुरुवातको अक्षरको नामबाट नै हुने गरेका छन्। कुन व्यक्तिको कस्तो चरित्र हुन्छ अक्षर अनुसार यस प्रकार व्याख्या गरिएको छ।
Previous post: यौनसम्पर्कबाट फैलने नयाँ रोग सार्वजनिक, अहिलेसम्मका कुनै पनि औषधि प्रभावहीन
Next post: तपाईलाई थाहा छ घडीको अलार्म हरेक ९ मिनेटमा किन दोहोरिन्छ ? यस्तो छ रोचक कारण